Delta Airlines inokurudzira gab spikes pamusoro pesimba rekudzivirira mushonga weCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Airlines inokurudzira gab spikes pamusoro pesimba rekudzivirira mushonga weCOVID-19
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Muna Nyamavhuvhu, hurukuro inoshamisa yakaitika pakati pevanhu vanokomberedza Delta Air Lines yakacherechedzwa apo kambani yakazivisa kuisa mutero weUS $ 200 pamwedzi kune vashandi vasina kubayiwa jekiseni re COVID-19.
Makambani eUS ari kuuya nezvirongwa zvekudzivirira zvirwere zveCOVID-29.
Delta Air Lines ichamanikidza madhora mazana maviri emadhora ekuwedzera kune vashandi vasina kubayiwa.
Delta Mhepo Lines 'hurongwa hwakatungamira kune 150% kukwira mukukurudzira kukurukurirana.
Makambani akati wandei akauya nehurongwa hwehutachiwana hwekudzivirira mushure mekubvumidzwa kweU.S.Food and Drug Administration's (FDA) mushonga wekudzivirira Pfizer-BioNTech COVID-19 muna Nyamavhuvhu 2021. Delta Air Lines, Inc (Delta Air Lines) yakatorawo matanho akasimba ekukurudzira vashandi kuwedzera mari yehutano yevashandi vasina kubayiwa pahurongwa hwavo hwezvehutano uye vanosangana nekukwira kunotarisirwa kwekudiwa kwekufamba. Izvi zvakatungamira mukukatyamadza kwemakumi mashanu neshanu muzana muhurukuro dzinotenderedza dzakatenderedza 'majekiseni' paDelta Air Lines kambani inokurudzira dashboard mukati memazuva makumi mapfumbamwe apfuura (Chikumi-Nyamavhuvhu), pamwedzi mitatu yapfuura.
Vafurira vakaona ichi senzira yekupedzisira yekunyengedza vashandi kuti vave neJOBV-19 jab, sezvo makesi ekuwedzera hutachiona akazadza tarisiro yendege. Kufuridzira manzwiro aive akanakawo pachiyero ichi sezvo iri danho rinodiwa kugadzirisa njodzi dzemari dzakabatana nekuti kugara muchipatara kweCOVID-19 kunodhara ndege yendege US $ 50,000 pamunhu.
Muna Nyamavhuvhu, kumwe kumuka kwehurukuro yekukurudzira kwakacherechedzwa apo kambani yendege yakazivisa kudyidzana kwayo neFrench-Belgian high-speed train opareta Thalys kupa hukama hwezvitima pakati peAmsterdam nemaguta eBelgium eBrussels neAntwerp.
Saizvozvowo, pakave nekukura kwakapinza mukukurudzira kukurukurirana muna Chikunguru, apo ndege yeAtlanta-yakamhan'ara mari yayo yekutanga yekota kubva kutanga kwechirwere cheCOVID-19, mushure mekutyora kota yechina yekurasikirwa. Kukwira kwenzvimbo yekuzorora yekuzorora uye yebhizimusi yekufambisa kudiwa pamwe nehurumende federal rubatsiro yakatsigira Delta Air Lines kuti uwane purofiti yekota yeUS $ 652m muQ2 2021.
Delta Air Lines yakazivisa hurongwa hwayo hunoshamisa munaJune kuhaya vanopfuura chiuru vezvikepe nezhizha ra1,000, mukutarisira kuwedzera kwekudiwa kwekufamba mushure mekupora kubva padenda. Izvi zvakakonzera kuwedzera mukukurudzira kukurukurirana munaJune.
Job Analytics Database inoratidza kuti kune mazhinji e2020, kambani yakaona chete-manhamba emabasa kutumira. Zvisinei, Delta Air Lines yakaona kuwedzera kwekuhaya zviitiko muna 2021. Zvinyorwa zvakawedzera kubva pamabasa 101 muna Ndira 2021 kusvika pamabasa 474 muna Nyamavhuvhu 2021, nekutumirwa kwemabasa kuri kuona 55% yekuwedzera pakati peQ2 2021 neQ3 2021.
Delta Mhepo Lines iri kukwiridzira kukanda mu2021 kuzadzisa kudiwa kukuru kwekufamba. Pamusoro pezvo, kubatira kwekambani kunosanganisira huwandu hwemabasa emwaka akachengetedzwa akadai sevashandi vevatengi, matikiti / magedhi ejenti, vamiririri vekutakura zvinhu vanoratidzwa. Kuhaya matekinoroji enjinjiniya uye mainjiniya vakaona kusimudzira kubva muna Chikumi 2021. Iyo kambani iri zvakare kutarisa kuwedzera mari yekutakura zvinhu uye chikamu chemusika muLatin uye EMEA dunhu.